Wacom oo soo bandhigtay Bamboo Paper Windows 10 | Hal-abuurka Online
Bamboo Paper waa a barnaamijka mobilada taas oo noo ogolaanaysa in aan helno faa'iidooyin taxane ah sida buugaagtaada wax lagu qoro si isku mid ah iyo in aan la wadaagi karno isticmaalayaasha kale si aan u wadaagno qoraalada ama u abuurno shaqooyin hal abuur leh sida mashruucyo ama waxa noqon lahaa sheeko degdeg ah.
Hadda waa Wacom oo doonaysa in aan meelna laga tegin la'aanteed barnaamijkeeda hal-abuurka leh ee weyn sida Bamboo Paper marka la bilaabayo. gudaha Windows 10 sida app caalami ah si loo isticmaalo Windows Phone ama PC. Imaatinka oo dhan kaas oo ugu dambeyntii siiya tayada sare ee Dukaanka Windows, goobta farsamada ee aad ka iibsan karto apps iyo ciyaaraha fiidyaha si aad uga hesho dhammaan noocyada software-ka mid ka mid ah goobahan.
Markaa ilaa maanta waxay yihiin in ka badan 110 milyan isticmaale taasi waxay awood u yeelan doontaa inay gasho Bamboo Paper gudaha Windows 10 iyo nooca mobilada. App-ka leh astaamo dhowr ah sida kartida uu u samayn karo sawir-gacmeedyo degdeg ah, wax ku sawiri karo, ku rinjiyeyn karo qoraallo hore loo qoray ama in aad gacanta ku samayso joornaal adiga kuu gaar ah.
Mid ka mid ah sifooyinkeeda ugu weyn waa awoodda ay siiso isticmaalayaasha awoodda la wadaag buug xusuus-qor ah xiriir kasta si uu isaga laftiisu wax uga beddelo oo uu u isticmaalo si uu ugu shaqeeyo hab iskaashi. Dareenkan, waxay u egtahay Microsoft's OneNote iyo kuwa kale oo yar, in kasta oo Bamboo Paper uu leeyahay taageerada ay la macno tahay inuu ka yimid Wacom.
Tani waa halka ay tignoolajiyada WILL ka soo gasho, taas oo loo isticmaali karo kaniiniyada Windows ilaa qoraal aad u dabacsan oo dabiici ah taas oo u dhow tii laga heli karo qalin nolosha oo dhan. Sida caadiga ah waxay leedahay lix burush oo kala duwan si ay u abuurto qoraallo oo u sameyso nooc kasta oo sawir-gacmeedyo ah, laakiin lacag-bixinta micropay-ka waxaad ku iibsan kartaa burush iyo warqado badan oo leh naqshado asal ah oo u beddelaya buug-yarahaaga wax aad u gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Wacom waxay waraaqaha Bamboo u keentaa Windows 10 oo ah barnaamij caalami ah